An-tsary: Mandatsa-bato ho an’ny hoaviny vaovao ny Shiliana · Global Voices teny Malagasy
Fandatsaham-bato manan-tantara ny fifidianan'ny Shiliana olona hanoratra indray ny lalàm-panorenana
Voadika ny 31 Mey 2021 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, русский, عربي, Esperanto , English
Zava-baovao ny fifidianana satria nahavita niatrika krizy politika i Shily tamin'ny alàlan'ny dingana demokratika. Tamin'ny taona 2019, nanetsika ny firenena ny fihetsiketsehana ka niteraka ny firodanan'ny rafitra politika. Tamin'ny voalohany, nanao fihetsiketsehana nanohitra ny fidangan'ny saran'ny fitaterana ny Shiliana, saingy lehibe kokoa noho izany ny tsy fahafaham-po: tsy afa-po tamin'ny sehatra maro teo amin'ny fiarahamonina Shiliana ny vahoaka. Nitombo ny tatitra momba ny herisetra ataon'ny polisy.
Nanolo-kevitra ny manampahefana ao Shily taorian'ny tsy fitoniana nandritra ny efatra herinandro hikarakara fitsapankevibahoaka hanovana ny lalàm-panorenana. Ny hanova ny lalàna mba hanome toerana hipoiran'ny rafitra politika vaovao no tanjona. Ny lalàm-panorenana vaovao nosoratan'ny olom-pirenena tsotra no nibahan-toerana tamin'ny valin'ny fitsapankevibahoaka, natao tamin'ny 20 Oktobra 2020. Ny lalàm-panorenana ankehitriny, nolaniana tamin'ny taona 1980 dia nosoratana nandritra ny fitondrana jadona tany Shily tamin'ny andron'i Augusto Pinochet, vanim-potoana nisian'ny herisetra ara-politika sy ny fanjavonan'olona maro. Raha tsorina, mariky ny fanombohana vaovao amin'ny fomba fitantanana ny lalàm-panorenana vaovao.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Oniversiten'i Shily, ireo mpanao fihetsiketsehana, izay vao haingana no hifidy dia manantena hahazo fanabeazana, fitsaboana, fisotroan-dronono tsara kokoa, ary fitoviana kokoa eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny tontolo iainana maharitra, ary ny fandraisan'indizeny anjara amin'ny politika.
Nilamina tanteraka ny tao anaty biraom-pifidianana, nisy ny filaharana indraindray. Nangina ny ankamaroan'ny olona, ​​niandry tamim-paharetana ny hifidy ary nody. 43 isan-jato ny taham-pahavitrihana, izay ambany kokoa noho ny nantenaina. Tsy nampoizina tanteraka ihany koa ny valim-pifidianana. Tsy nahomby ny faminavinana sy ny fanadihadiana rehetra nataon'ny fampitam-baovao. Noheverin'izy ireo fa hivoaka ho mpandresy ireo kandidà avy amin'ny elatra havanana sy afovoany havia. Tsy izany anefa no nitranga.
Nampametram-panontaniana tokoa ny fandraisana anjaran'ny tanora. Hatreto dia mbola tsy nisy angona ofisialy, saingy nanamarika ny mpandalina fa ambany ny taham-pandraisan'anjara.
Mizara fotokevitra politika telo araka ny fomban-drazana ny tontolo politika any Shily: ankavia, afovoany ary havanana. Nanolotra kandidà ireo antoko nentim-paharazana anefa mahaleo tena ny 60 isan-jaton'ny kandidà, araka ny fanadihadiana iray. Ankehitriny, ireo mahaleo tena manana seza miisa 65 (40 isan-jato) no hery politika lehibe, manaraka azy ny antoko elatra ankavia, ny elatra afovoany ankavia ary ny elatra havanana. Izany hoe, tsy nifidy antoko politika hanoratra ny lalàm-panorenana izay efa nitondra an'i Shiliy nandritra ny am-polo taonany maro ny vahoaka.